Fitaovana fizarana fitaovana - K-Tek Machining Co., Ltd.
K-Tek machining Co., Ltd. miorina ao Shina. Ny orinasanay dia afaka manamboatra ny famokarana karazana milina mazava tsara mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa, manana mpiasa 200 izahay izao. Ny vokatray manodidina ny 20% aondrana any Japon, 60% aondrana any Eropa sy Amerika, afaka manome anao kalitao avo sy vidiny mifaninana izahay.
Ny fikosoham-bary CNC dia vahaolana mahomby amin'ny vidin'ny milina misy endrika sarotra sy / na mahazaka mafy, indrindra ho an'ireo tetikasa ambany. Ny fikosoham-bolo vita amin'ny CNC dia afaka mamokatra saika ny endriny rehetra izay azon'ny fitaovana fanapahana mihodina. Ary koa, raha manana singa tsy boribory na toradroa ianao ary manana endrika tsy manam-paharoa na sarotra, dia afaka manampy izahay. Miaraka amin'ny fahaiza-manao amboarina ao anaty trano, manampahaizana manokana izahay amin'ny fikosoham-bary mazava tsara sy ny fametahana ny milina sarotra alain-tanana, sarotra atao fanamboarana, fametahana ary singa vy hafa.
Mihodina ny CNC:
K-Tek dia manolotra serivisy fitodihana CNC marim-pototra ho an'ny indostria sy fampiharana marobe. Ny fizotry ny fihodinana dia misy ny fanapahana, ny fiatrehana, ny fanaovana kofehy, ny famolavolana, ny fandavahana, ny fikororohana ary ny mankaleo. Afaka miasa amin'ny vy, vy, varahina, varahina, varahina, vy, nikela, tin, titanium, Inconel ary maro hafa izahay. Azontsika atao koa ny milina plastika toy ny ABS, Polycarbonate, PVC, ary PTFE. Ny haben'ny sangan'asa dia manomboka amin'ny latsaky ny 1 "ny savaivony ka hatramin'ny 10" ny savaivony, ary hatramin'ny 12 "ny halavany, miankina amin'ny fanaingoana ampahany. Mandritra ny fahaizany mitondra anaty lathes dia hatramin'ny 3 "savaivony.
Machining famaky dimy:
Ny fametahana axis dimy dia ahafahantsika mifindra fitaovana miaraka amina famaky dimy samihafa miaraka. Manome masinina mazava tsara ny faritra saro-takarina sy ny fahaizana mandatsaka singa marobe… vita ara-toekarena tokoa ny fampiasana an'io haitao mandroso io. Ny milina cnc axis dimy sy ny familiana dimy lafiny dia tsara ihany koa amin'ny fanatrarana ny famaranana tsara dia takiana amin'ny mpanjifanay.
Famolavolana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra (EDM) dia teknolojia tena mazava tsara hanapahana saika fitaovana fitondra herinaratra. Ny tariby EDM manify sy voadidy herinaratra napetraka eo anelanelan'ny torolàlana mekanika roa dia mamorona elektroda iray, raha ny fitaovana tapaka kosa no mamorona ilay elektroda hafa. Ny famoahana herinaratra eo anelanelan'ny electrodes roa (ny tariby sy ny workpiece) dia mamorona tsipika manapaka ny fitaovana. Satria ny tariby voadidy dia tsy mifandraika velively amin'ny workpiece ao amin'ny EDM machining, io fomba io dia azo ampiasaina hamokarana ampahany kely sy marefo izay mitaky haavon'ny fahamendrehana sy ny fahasarotana izay tsy vitan'ny milina nentim-paharazana.